Bug muMacOS High Sierra inokutendera kuti uvhure "zvaunofarira" kubva kuchitoro chekushandisa nechero password | Ndinobva mac
Bug muMacOS Yakakwira Sierra inokutendera iwe kuvhura app chitoro "zvaunofarira" nechero password
Iko kukanganisa kutsva kwaonekwa mu yazvino vhezheni 10.13.2 ye macOS Yakakwira Sierra. Mune ino kesi, ine chekuita nekugadzirisa izvo zvinodiwa nechitoro chekushandisa paMac.Ichokwadi ndechekuti hwindo iri rinogona kuvhurwa nekuisa chero password, saka chengetedzo yechikamu icho chehurongwa yakanganiswa.
Ichi ndicho kukanganisa uko Apple yatove kuona uye kuti yakagadziriswa mune yekupedzisira betas iyo yakaitwa kuti iwanikwe kune vanogadzira, saka kana iwe ukatevera nhanho dzatichazokuudza, unogona kutarisa izvo, zvechokwadi, kuti bhaggi iripo.
Ndiani arikufunga kuti kune bhagiri muchikamu icho chehurongwa? Kazhinji, patinosvika pahwindo ratataura, tinopinda humbowo chaihwo tisina kukanganisa, asi kuti hunoshanda sei nekupinda chero password, kunyangwe tikakanganisa mashandiro ehurongwa akarurama uye zvakatiomera zvikuru kuti tizvizive.
Nekudaro, kune vashandisi vakaona iyi bug uye vakaridza alarm. Munguva pfupi yapfuura Apple iri kuita zvikanganiso zvakawanda zvekuchengetedza mumasisitimu ayo ekushanda, saka tinofunga kuti chimwe chinhu chiri kuitika pamwe nehunhu hwevanhu vari kutarisira zvirongwa zvitsva zveMacOS.
Kuti ubereke zvakare kutadza unofanirwa kutevedzera anotevera matanho:
Takapinda Sarudzo dzeSystem> App Store
Patinodzvanya pane inokiya mukati kuruboshwe kuruboshwe, hwindo rinoratidzwa kuisa humbowo. Pinda chero password uye iyo system ichavhura iyo skrini, kusvetuka kunofungidzirwa kuchengetedzeka kwainako.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » Bug muMacOS Yakakwira Sierra inokutendera iwe kuvhura app chitoro "zvaunofarira" nechero password
Izvo hazvina kana kukosha kuisa password, kunyangwe iro zita rekushandisa rinogona kuchinjirwa kune risipo kana kusapinda kana iro zita rekushandisa kana password, uye rakavhurwa zvakadaro.
Saka zvese, iko kukundikana kunoda kupinda kwakananga kukomputa nechikamu chakatotanga ... Chiri chinetso chakakosha, asi kwete zvakanyanya sevamwe munguva yakapfuura uye kuti, mukuwedzera, Apple iri kutoshanda kugadzirisa mune yekupedzisira BETAS sekutaura kwawakaita.
Satechi akazivisa 2018w USB-C multiport charger kuCES 75
Zvinodhaka muIOS zvine mhinduro yakapusa mu macOS